यस्ता छन् गर्भावस्थामा यौनसम्बन्ध राख्नुका फाइदा - हेल्थ आवाज
गृहपृष्ठ ∕ अन्य ∕ यस्ता छन् गर्भावस्थामा यौनसम्बन्ध राख्नुका फाइदा
हेल्थ आवाज आईतबार, २०७७ साउन १८ गते, २१:०० मा प्रकाशित
सृष्टि एवम् आपसी निकटताको केन्द्रबिन्दु मानिने सम्भोग वैवाहिक जीवनको एक आनन्दमय पाटो हो । यसको अनुपस्थितिमा असम्भव रहेको संसारको सारा सृष्टि यसैका कारण अडिग छ । सम्पूर्ण सृष्टिको भार बोकेको सम्भोग गर्भअवस्थामा भने कत्तिको उपयोगी रहेको छ त? के गर्भअवस्थामा पनि यसको फाइदा उठाउन सकिन्छ ? यो कतिपयको जिज्ञासा हुन सक्दछ ।
गर्भावस्था एक संवेदनशिल अवस्था भएता पनि नाजुक अवस्था भने नभएको विज्ञहरुको भनाइ छ । तसर्थ, यस अवस्थामा पनि यौन आनन्द प्राप्त गर्न सकिने उनीहरु बताउँछन । उल्टो यस समयमा कायम गरिएको सम्भोगले आमा तथा गर्भमा रहेको भ्रुण दुवैलाई फाइदा समेत हुने देखिन्छ ।
‘काउन्सिल कपल बिफोर, ड्युरिङ एण्ड आफ्टर प्रिग्नेन्सी’ का लेखक एवम् सेक्स थेरापिस्ट स्टेफ्यानि ब्युलरले महिलाको इच्छा भएमा सजग रुपमा सम्बन्ध कायम राख्न सकिने बताउँछिन् । ‘यस समयमा हुने हार्मोनको गडबढका कारण महिलामा यौनइच्छा उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ, त्यस्तो समयमा भने सम्बन्ध कायम राख्न सकिन्छ, उनले भनिन् ।
‘यद्यपि कतिपय महिलालाई यस समयमा यौन इच्छा उत्पन्न नहुने भएकाले सम्भोगपूर्व उनको रुचिमा पनि ध्यान दिनुपर्दछ, ‘ब्युलर भन्छिन् । यस समयमा सामान्य अवस्थाभन्दा फरक रहेकोले गर्भअवस्थामा गरिने सम्भोग बडो होशियारपूर्वक कायम राखिनु पर्दछ । यसअन्र्तगत गर्भवतिको खुट्टा धेरै फाटिने एवम् जोडले दिएको धक्काका कारण शिशुमा असर समेत पुग्न सक्छ । तसर्थ, यसको लागि परीक्षणको क्रममा आफ्नो नियमित चिकित्सकसँग सल्लाह लिँदा उचित रहनेमा उनले जोड दिइन् ।
गर्भावस्थामा सम्भोग राख्नुका फाइदाहरु
अनावश्यक क्यालोरीको अन्त्य,
गर्भावस्थामा गरिने सम्भोग तपाईले गर्नुभएको शारीरिक व्यायाम बराबर हो । यस्तो अवस्थामा कायम गरिएको करिब ३० मिनेटको सम्भोगले करिब ५० क्यालोरी नष्ट गर्दछ ।
उच्च रक्तचाप आमा तथा शिशु दुवैको निम्ति एक जोखिमपुर्ण अवस्था हो । तसर्थ, गर्भावस्थामा देखिने यस्तो जोखिम सम्भोग कायम गरी प्राकृतिक रुपमा नै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
गर्भावस्थाको दौरानमा देखिने विभिन्न लक्षण एवम् समस्यामध्ये गर्भवतिलाई निन्द्रा नलाग्नु र छटपटि हुनु पनि हो । तर, सम्भोगले गर्भवतिको यस्तो समस्यालाई टाढा राखी गहिरो निन्द्रा प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ ।
पीडा एवम् असहजतालाई टाढा राख्छ,
सम्भोगको माध्यमबाट महिलामा अक्सिटाइन हार्माेनको निष्काशन हुन पुग्छ । जसले महिलाको पीडा सहन गर्न सक्ने क्षमतामा समेत वृद्धि गर्दछ ।
अन्य समयकोभन्दा फरक अनुभूति,
माथि उल्लेख गरिएजस्तै गर्भावस्था अन्य सामान्य अवस्थाभन्दा केहि फरक रहेकोले यस अवस्थामा कायम गरिएको सम्भोगले महिलालाई एक फरक किसिमको अनुभूति प्रदान गर्दछ । जुन उनी हर समय प्राप्त गर्न सक्दिनन् ।
आफ्नो निकट सम्बन्धको कायम,
आफू गर्भवति भएकोले यौन सम्बन्ध कायम गर्न इन्कार गरेकै कारण आफ्ना श्रीमान् अन्य युवतीप्रति आकर्षित हुने धेरै महिलाहरुको गुनासो रहेको छ । तसर्थ, सम्भोग कायम भइरहेमा भने पुरुषहरु अन्य युवतीतर्फ आकर्षित हुने समस्यामा समेत कमी आउँछ । जसबाट आफ्नो आपसी सम्बन्ध उसैगरी कायम रहिरहन मद्दत पुग्दछ ।